अस्तित्व - कथा - नारी
शारदा कोठाभित्र प्रवेश गर्छिन् जहाँ भास्कर पलङमा उत्तानो परी सुतिरहेका हुन्छन् । भास्करलाई सुतेको देखेपछि शारदा फर्कन खोज्दा पलङको डन्डामा ठोक्किन पुग्छिन् अनि भास्करका आँखा खुल्छन् । भास्कर, ‘शारदा किन फर्किएकी ?’
शारदा साडीको सप्को अगाडि ल्याउँदै भास्करतिर फर्किन्छिन् ।
शारदा, ‘होइन, हजुर । हजुर सुतिरहनुभएकोले निद्रा बिथोलिन्छ कि भनेर ?’
त्यत्तिकैमा भास्कर हातले संकेत गर्दै उनलाई आफू नजिक आउन अनुरोध गर्छन् ।
भास्कर, ‘आऊ शारदा, मेरो नजिक बस ।’
शारदा बिस्तारै अगाडि बढ्छिन् र भास्करको बायाँपट्टि पाउ (खुट्टा) नजिक बस्छिन् ।
भास्कर खोक्दै बिस्तारै बोल्छन्, ‘शारदा किन पाउमा बसेकी मेरो छेउमा बस ।’ शारदाको आँखाबाट आँसु झर्न थाल्छन् । उनले मसिनो स्वरमा भन्छिन्, ‘हजुरको पाउ नै मेरो स्वर्ग हो । म जीवनभर हजुरको चरणमा बस्न चाहन्छु ।’
भास्कर हल्का शिर उठाउँदै, ‘शारदा आऊ न फेरि बस्न पाउँला कि न पाउँला ?’
शारदा पलङको छेउमा राखेको स्टुल तान्दै भास्कर पल्टेको पलङको देब्रेपट्टि बस्छिन् । भास्कर शारदाको हात समाउँदै आफ्नो मुटुमाथि राख्छन् ।
भास्कर, ‘शारदा मलाई माफ गर ।’ यत्ति के भनेका थिए, शारदाका आँखाबाट आँसु झरे ।
भास्करका कुरा सुनेर शारदा छक्क परिन् । भास्करको आँसु पुछ्दै भावुक स्वरमा भनिन्, ‘के भो हजुर ? मबाट कुनै गल्ती त भएन ? किन यस्तो कुरा गर्नुभएको हो ?’
शारदा बोलिरहँदा भास्करका आँखाबाट आँसुका धारा बग्न थाले । भास्करले शारदाको हात समाएर भने,‘शारदा मलाई माफ गर । जीवनभर म केवल आफ्नै निम्ति बाँचें । आना आमाबुवाका निम्ति मात्र सोचें ।’
शारदा, ‘त्यसो होइन हजुर । हजुरले पनि मलाई माया गर्नुभएकै छ । मलाई त्यो भन्दा बढी अरु केही चाहिएको छैन । शारदाको गालामा प्रेमले स्पर्श गर्दै ‘शारदा ! म तिम्रो दोषी हुँ । तिमीमाथि मैले अन्याय गरेको छु । तिमी छोरी बन्यौ, तिमी दिदीबहिनी बन्यौ, तिमी श्रीमती बन्यौ, तिमी बुहारी बन्यौ र तिमी श्रीमती शारदा भास्कर त्रिपाठी पनि बन्यौ तर तिमीलाई शारदा शर्मा रहन दिइन । तिम्रो अस्तित्वमाथि प्रहार गरें, मलाई माफ गर ।’
शारदाले झुकेको शिरलाई उचाली भास्करको छातीमा राखिन् । भास्करको मुटु जोर–जोरले धड्किरहेको थियो । मानौं त्यो कोठामा अरू आवाज शून्य भएछ । केवल भास्करको मुटुको ढुकढुकी मात्र सुनिन्छ ।
भास्कर बोल्दै जाँदा शारदाका आँखामा अतीतका पानाहरू पल्टिन थाले । करिब २२ वर्षकी युवती, नीलो ट्रयाकसुट, सेतो जुत्ता लगाएकी, एक हातमा हक्की र अर्को हातमा ट्रफी लिई दौडँदै कोठाभित्र प्रवेश गरिन्, ‘बाबा... बाबा’
बाबा, ‘ओहो मेरी छोरी आयौ, ‘छोरी कोही अरु होइन शारदा हुन्छिन् । उनी बाबाकी बहादुर छोरी मात्र होइन जिल्लामै बहादुर थिइन् ।
शारदा, ‘लभ यु बाबा ।’ शारदाको निधारमा चुम्दै, ‘लभ यु छोरी, तिमीले गोल्ड मेडल पाएर आफ्नो पहिचान बनायौ । आफ्नो नाम संसारभरि फैलाएर हाम्रो शिर उचो बनायौ । अझै तिम्रो नाम फैलिएको देख्न पाऊँ ।’
शारदा खुसी हुँदै, ‘बाबा अब हाम्रो खेल स्टेट लेभलमा हुँदैछ । केही दिनमै फाराम खुल्दैछ ।’ त्यहीँ उनकी आमाको प्रवेश हुन्छ, ‘हुन्न... हुन्न, नानी । तिमीले स्नातकोत्तर (डिग्री) पास पनि गरिसक्यौ, मेडल पनि ल्याइसक्यौ, अब विवाह गर्ने बेला पनि भइसक्यो । तिमीले घर–गृहस्थीतिर ध्यान दिनुपर्छ ।’
शारदा, ‘आमा अहिले नाइँ । अहिले गेम खेल्नु छ । आफ्नो पहिचान बनाउनु छ, प्लिज आमा–बुवा केही त बोल्नुस् ।’ बाबा मौन हुन्छन्, केवल सुनिरहन्छन्, कुनै प्रतिक्रिया दिन्नन् ।
आमा, ‘छोरी बुझ हामी तिम्रा शत्रु होइनौं । तिम्रा लागि नै भनेका हौं । राम्रो घर, राम्रो वर छ, तिमीले राज्य गर्नेछौ । यसै पनि पराइ धनलाई धेरै दिन राख्न हुन्न छोरी । मान हाम्रो कुरा । तिमी विवाह गरेर पनि खेल्न सक्छ्यौ ।’
आमाको ढिपीका अगाडि कसैको केही चल्दैन । शारदासँग आमा–बुवाको कुरा मान्नुबाहेक कुनै विकल्प हुन्न । अन्ततः शारदाको लगनगाँठो इन्जिनियर भास्करसँग बाँधिन्छ । विवाहको केही दिनपछि विवाह दर्ता गराउन नयाँ जोडी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्छ । विवाह दर्ता फाराम भर्न लाग्दा शारदाले आफ्नो नाम शारदा शर्मा लेखिन् । भास्करले फाराम देखेपछि ‘शारदा तिमीले लेखेको गलत भयो, तिमी अब विवाहित हौ, ल्याऊ म तिम्रो फाराम भरिदिन्छु ।’ फाराममा शारदाको नाममा त्रिपाठी थप्छन् । शारदा शर्माको सट्टा शारदा भास्कर त्रिपाठी लेख्छन् । शारदा केही बोल्दिनन् तर उनको आँखाबाट आँसु झर्छन् । उनले आफ्ना सपना सिसाझैं टुक्रा–टुक्रा भएर भुइँमा खसेको देखिन् ।
स्याँ–स्याँ गरेको भास्करको आवाज शारदाको कानमा ठोक्किन्छ । शारदा झसङ्ग हुन्छिन् ।
भास्कर, ‘मलाई माफ गर म तिम्रो दोषी हुँ । म न तिम्रो प्रेमी बन्न सकें न तिम्रो पति । न त तिम्रो सच्चा साथी नै बन्न सकें । तिम्रो अस्तित्व नै नष्ट गरें पुरुषत्वको अहममा । शारदा रुँदै भास्करको छातीमा लतपतिन पुग्छिन् ।
शारदा, ‘त्यसो न भन्नुस्, म एउटी स्त्री हुँ जसको धर्म पतिको सेवा हो । स्त्रीको शिक्षाको प्रारम्भ नै सेवा, त्याग, बलिदानबाट हुन्छ । उच्च शिक्षा, समर्पण एवं त्याग नै हाम्रो जीवन हो । अब म ५० वर्षकी भएँ, पहिले बाबाकी छोरी, अहिले हजुरकी श्रीमती । सपना भनेको सपनै हो । कसैको साकार हुन्छ कसैको हुँदैन । तर पनि म खुसी छु । समय अघि बढ्दै गयो हक्कीको साटो डाडु–पन्यू, दुई चुल्ठी केश एउटा जुरोमा परिणत भयो । ट्रफीको सट्टा दुई छोरा र दुई छोरी छन् । मलाई माया गर्ने पति......।’ उनी निरन्तर बोलिरहन्छिन् । अचानक कोठाभित्र सुनसान हुन्छ । कुनै आवाज सुनिन्न । शारदा भास्करको अनुहारमा हेर्छिन् । भास्करको ढुकढुकीको कुनै आवाज हुँदैन । भास्करका आँखा एकदम शून्य र मुख खुला देखेर शारदा मौन हुन्छिन् । केवल उनका आँखाबाट आँसु बगिरहन्छन् ।
भाद्र २४, २०७३ - अस्तित्व भए नवौं मास्टर स्टार –२०१६
चेलीको पीडा वैशाख ९, २०७९
समझदार श्रीमती चैत्र ११, २०७८
आदत फाल्गुन ९, २०७८
आमाको माया माघ २८, २०७८
पहिलो माया मंसिर १४, २०७८
प्रेम र यौन कार्तिक १६, २०७८